ओलीको प्रश्न: वुद्धिजीविहरु के भन्थे मैले यसरी पदक बाँडेको भए ?- एकपत्र
ओलीको प्रश्न: वुद्धिजीविहरु के भन्थे मैले यसरी पदक बाँडेको भए ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रत्नपार्कमा बसेर बाँडेझैं पदक बाँड्दा पनि बुद्धिजीवि, नागरिक समाज सबै मौन बसेको आरोप लगाएका छन् ।
हामीलाई कुनै टाउको दुखेको होइन, तर यति धेरै पदकहरु त कहिल्यै वितरण भएको थिएन । रत्नपार्कमा बसेर वितरण गरे जस्तो छ क्या, ह्वार ह्वारी ।
म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो गएको भए ओ हो के हुन्त्यो ? वुद्धिजीविहरु के भन्थे ? नागरिक समाज के भन्थ्यो ? आज रमाइलो छ, सब चुप छ, शान्त छ ।
सरकारले १४०० रणनीतिक सडकको समेत काम रोकेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘क्या बहादुर सरकार ! अघिल्लो सरकारले रणनीतिक सडक बनाउँछु भन्यो । यो सरकारले आउनेवित्तिकै रोक्यो । ल बना बाटा ! केपी ओलीको फुर्ती एक्कै झट्कामा खत्तम पारिदिन्छु भनेर १४०० बाटो खत्तम ।’
शेरबहादुर देउवा सरकारले आफूतिर नलाग्ने कर्मचारीलाई अपायकमा सार्न थालेको उनको आरोप छ ।